လူကုန်ကူးမှုမဟုတ်သောလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်း (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Horm ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC မေလ 1, 2012 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Horm ပြုမူနေ။ 2011 နိုင်ပါစေ; 59 (5): 696-701 ။
အောက်တိုဘာ 26, 2010 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2010.10.009
ချားလ်စ်တီ Snowdon,1 Pamela အယ်လ် Tannenbaum,2,3 နန်စီဂျေ Schultz-မိုက်,2 Toni အီး Ziegler,2 နှင့် Craig အက်ဖ်ကူးတို့4
လိင်စိတ်နိုးထ၏အေးစက်ငါးကနေလူသားတော်တော်များများမျိုးစိတ်အတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်သရုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ nonhuman မျောက်ဝံများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုနှိုးဆှကြောင်း pheromones ထုတ်လုပ်ရန်ရှိမရှိကျော်ရှိနေပြီ။ ဘုံ marmosets တွေကိုပုသားအိမ်သံသရာတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် copulate သော်လည်း, ယောက်ျားတစ်ဦးလိင်နှိုးဆွရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များအမျိုးသမီး ovulating ဝတ္ထု၏အနံ့ထိတွေ့ပြီးနောက်, arousal ၏အမူအကျင့်ဆိုင်းဘုတ်များပြ anterior hypothalamus ၏တိုးမြှင့်အာရုံကြော activation ကိုသရုပ်ပြနှင့် preoptic ဧရိယာ medial နှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုတိုးပြီ pheromones ။ ယောက်ျားကိုလည်းကြိုတင်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့မျိုးဥထွက်မှအန်ဒရိုဂျင်တိုးလာကြပါပြီ။ သို့သော် ovulating အမျိုးသမီး၏အနံ့နှင့်အတူတင်ပြအထီးလှုံ့ဆျောမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်များစွာသောအခြားဦးနှောက်ဧရိယာ activation ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျွန်တော်အထီး marmosets တွေကိုစိုက်ထူ၏လေ့လာရေးနှင့်အတူတစ်ဝတ္ထု, မတရားအနံ့ (သံပုရာ) မှအေးစက်နိုင်သရုပ်ပြ, သူတို့သည်ယခင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြုံတွေ့နှင့်အမျိုးသမီးပစ္စုပ္ပန်မရှိဘဲ postconditioning စမ်းသပ်မှုအတွက်ကုပ်ခြစ်တိုးလာရှိရာတည်နေရာရှာဖွေရေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်အေးစက်တုံ့ပြန်မှုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအခြားမျိုးစိတ်လေ့လာမှုတွေအစီရင်ခံထက်အေးစက်တစ်အများကြီးပိုရှည်တည်တံ့အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အဆုံးပြီးနောက်တစ်ပါတ်မှတက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်နောက်ထပ်, ovulating အမျိုးသမီး၏အနံ့ pheromones မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုတင်းကြပ်စွာစကားပြောနှင့် marmoset အထီးအိမ်ထောင်ဖက်ဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေခံပံ့ပိုးအမျိုးသမီး၏အနံ့၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသင်ယူစေနိုင်သည်။
keywords: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်, လိင်စိတ်နိုးထ, pheromones, ဘုံ marmosets တွေကို, pair တစုံ-Bond
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အပေါ်သုတေသနပြု၏ပဟေဠိတစ်ခုမှာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များသက်ရှိလိင်စိတ်နိုးထမှုအတွက်သဘာဝတွေကိုတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အမှန်တကယ်မျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးတိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ ငါးများတွင်အပြာ gouramis (Trichogaster trichopterus), Holly နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Holly et al, 1989, 1997) အိမ်ထောင်ဖက်၏တင်ဆက်မှု၏ကြိုတင် Pavlovian conditional အချက်ပြပိုင်နက်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ပိုးပန်းခြင်းနှင့်ချော့မြှူအပြုအမူ inhibited ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အေးစက်ရလဒ်အဖြစ်ယောက်ျားကပိုမကြာခဏအမျိုးသမီးနှင့်အတူရှိရာသို့အလျင်အမြန် Clasp အမျိုးသမီးမွေးထုတ်ခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဆိုက်ရောက်အချက်ပြရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းအထီးထက်ငယ်ရွယ်ကျန်ရစ်သူပိုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Domjan et al။ (1998) အထီးငုံးလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်တစ်ခုသပ္ပါယ်အားသာချက်အကြံပြုခြင်း, ထိန်းချုပ်မှုငုံးထက်သုက်နှင့် spermatozoa ပိုမိုနံပါတ်များကိုပိုမို volumes ကိုထုတ်လုပ်လိမ္မော်အရောင်အမွေးအတောင်၏တင်ပြချက်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးကိုမျှော်လင့်ရန်အေးစက်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
လိင်စိတ်နိုးထအေးစက်သို့မဟုတ်အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးကိုလည်းဖြစ်စေတိုးဖို့ဖြစ်နိုင်ကုထုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသုတေသနအကျိုးစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်လိင်စိတ်နိုးထလျော့သို့မဟုတ်အခြားပစ်မှတ်ဆီသို့စေခြင်းငှါဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအတွက်မော်ဒယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အခြေခံအလုပ်အများကြီး nonhuman တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, Crowley et al။ (1973) သူတို့တစ်ယောက်တည်းသေံနှိုးဆွဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ PACE မယ်လို့ဒီတော့လိင်တုံ့ပြန်ခြင်းအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိလှုံ့ဆော်ဖို့ပျော့လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့်အတူတွဲနေတဲ့လေသံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Zamble နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (1985, 1986) သုတ်ရည်လွှတ်မှ latency လျော့နည်းသွားလက်ခံအမျိုးသမီးကပ်လျက်ထူးခြားတဲ့ကွန်တိန်နာထဲမှာအထီးကြွက်နေရာချခြင်းနှင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစ 6-9 အေးစက်လမ်းကြောင်းလိုအပ်နှင့်ကြွက်များအဖြစ်ကောင်းစွာနောက်ခံလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်လာခဲ့တဲ့ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ Kippin et al။ (1998) တစ်ဦးယူဆရကြားနေဗာဒံသီးအနံ့တွဲ (သို့သော်အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်များဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်၎င်းအေးစက်အနံ့နဲ့အမျိုးသမီးတစ်သင်ယူ ejaculatory preference ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Domjan et al။ (1988) ဂျပန်ငုံးတွေ့ရှိခဲ့ (Coturnix japonica) လိမ္မော်ရောင်အမွေးနှင့်အတူတန်ဆာဆင်အမျိုးသမီး၏ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းမှအေးစက်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများနှင့် conditional သုတ်ရည်ထိအပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Johnston et al။ (1978) အထီးဟမ်းစတားအတွက်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိတွေ့နှင့်အတူတွဲခြင်းကိုမနှစ်သက် inducing lithium chloride တို့ (Mesocricetus auratus) နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကို sniff ရန်နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်အမျိုးသမီး mount မှတိုးချဲ့အောင်းနေချိန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ Meisel နှင့်ယုပ္ပေ (1994) သူတို့တစ်တွေအထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်ခဲ့သောအတွက်အခန်းများအတွက် conditional ရာအရပျ preference ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ McDonnell et al။ (1985) မြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ပုံစံတီထွင် (Equus caballus) စိုက်ထူ-ဆက်ပြောပါတယ်ဆန္ဒရှိလေ့ကျင့်ရေးကို အသုံးပြု. နှင့် Diazepam နှင့်အတူဤအဆိုးကျိုးများ reverse နိုင်ဘူး။ ဤရွေ့ကား nonhuman တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူပြုသည်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဟန့်တားရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်သုတေသနအမျိုးအစား၏သရုပ်ဖော်ပုံများ, ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုတွေ့မြင်များအတွက် Pfaus et al။ (2001 (2004) နှင့် ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ (2004).
အလားတူလေ့လာမှုများကဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်အနည်းငယ်ဥပမာအတူလူသားမြားသပြုပါပြီ။ Letourneau နှင့် O'Donohue (1997) တစ်ပယင်းအလင်းခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုတိပ်ခွေနှင့်အတူတွဲသောအခါအမျိုးသမီးအခွအေနေလိင်စိတ်နိုးထ၏သက်သေအထောက်အထားများရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပေ။ Lalumièreနှင့် Quinsey (1998) လိင်ဆက်ဆံခြင်းတစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုတိတ်ခွေနှင့်အတူတွဲ scantily ဝတ်အမျိုးသမီးများ၏ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြု. ယောက်ျားလေ့လာအေးစက်ပြီးနောက်တစ်ဦးတည်းတင်ဆက်ပစ်မှတ်နှိုးဆွဖို့လိင်အင်္ဂါ arousal အတွက်ကျိုးနွံ, 10% တိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Hoffman ဟာ et al။ (2004) subliminal နှင့် supraliminal နှစ်ဦးစလုံးထိတွေ့မှုအကြိမ် အသုံးပြု. သေနတ်၏ရုပ်ပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ဝမ်းဗိုက်၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုပေးအပ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းသေနတ်များဖို့ထက်ဝမ်းဗိုက်၏ subliminal ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလိင်အင်္ဂါ arousal သရုပ်ပြ, ဒါပေမယ့်ဒါပမေဲ့အံ့သွအမျိုးသမီးတွေမဟုတ်ဘဲဝမ်းဗိုက်၏ဓာတ်ပုံများကိုဖို့ထက်သေနတ်များ၏ပုံ supraliminal တင်ဆက်မှုပိုမို conditional arousal ပြသခဲ့သည်။ နှစ်ခုလုံး et al။ (2004) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှိုင်းယှဉ်ကြားနေဖို့လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုတိုင်းတာနဲ့ exposure အောက်ပါနေ့ရက်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်သင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးလိင်အင်္ဂါ arousal ပြနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုပြီးနောက် arousal နှင့်တပ်မက်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုအစီရင်ခံနှင့်ဤသင်တန်းသားများကိုလည်းလေ့လာမှုကိုအောက်ပါနေ့ရက်ကာလ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယျသို့သောလူသားမြားပျေါတှငျဤအလေ့လာမှုများအကြောင်းကိုမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုဖို့ခိုင်မာတဲ့အေးစက်နှင့်အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုရှာတွေ့ဖို့ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကြားနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ, မတရားအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု, တန်ချိန်သို့မဟုတ်အနံ့ကိုအသုံးပြုပြီတိရိစ္ဆာန်များအပေါ်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထူးသကွာခြား။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အချို့ကိုပုံစံပြခဲ့ကြလူသားမြင်းမှငါးကနေငှက်ကြွက်မှ taxa ၏ကျယ်ပြန့ပေမယ့်, ငါတို့ nonhuman မျောက်ဝံများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မဆိုကြိုတင်လေ့လာမှုများတည်ရှိကြပြီမဟုတ်။ nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်တစ်ခုစာမေးပွဲ သာ. ကြီးမြတ် taxonomic ပြည့်စုံဘို့မသာတန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်း nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ယန္တရားများကိုရည်မှတ်တဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ရာအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလဒေတာများကို။
တစ်မှတ်တိုင်စက္ကူခုနှစ်တွင် သဘာဝ မိက္ခေလနှင့် Keverne (1968) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကိုဆက်သွယ်နှင့် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ inducing အတွက် pheromones (လက်ခံသူများအတွက်ပင်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလွှတ်ကြောင်းအနံ့) ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့သုတေသနပြုယောက်ျားအတွက် ovulatory သံသရာနှင့်ရာထူးတိုးလိင်စိတ်နိုးထဖြတ်ပြီးကွဲပြားစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်အင်္ဂါဇာတ် Secret အတွက် aliphatic အက်ဆစ်ကနေ chemosensory signal ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြံပြုသည်။ Goldfoot (1982) ကို aliphatic အက်ဆစ်ဟာ luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အထွတ်အထိပ်သို့ကြောင့်ရှာဖွေတာမျောက်များအတွက်အင်္ဂါဇာတ် pheromones ၏အယူအဆကိုငြင်းပယ်လျှင်, pheromones ယူဆချက်မှဆန့်ကျင်သည်, မိမိလေ့လာမှုများအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးချင်းပိုမိုနှစ်သက်အိမ်ထောင်ဖက်ရှိသည်ထင်ရှား ovariectomized အမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်မယ်လို့ နှင့်အစိမ်းရောင်ငရုတ်ကောင်း၏ non-pheromones ဝတ္ထုအနံ့မှဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ Goldfoot (1982) အင်္ဂါဇာတ် aliphatic အက်ဆစ်, ယောက်ျားတစ်ဦးလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အမျိုးသမီးအဖြစ်စညျးမဉျြးစညျးကမျး copulatory အပြုအမူမဟုတ်အစေခံမပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ သူကနောက်ထပ်သူမဆိုအေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသရုပ်ပြမပြုခဲ့ပေမယ့်ယောက်ျားနှစ်သက်သောအမျိုးသမီး၏အမျိုးမျိုးသောအာရုံခံအင်္ဂါရပ်များကိုလေ့လာသင်ယူကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ Callitrichid မျောက်ဝံများ, marmosets တွေကိုနှင့် tamarins, ပူးပေါင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း pair တစုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်သားအိမ်သံသရာတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ပင်ကိုယ်ဝန်အတွက် copulate ရှိရာကမ္ဘာသစ်ကနေမျောက်မွေးမြူနေကြသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကမျိုးဥထွက်ဖုံးကွယ်ခဲ့ကွောငျးထင်ပေမယ့်ခဲ့သည် Ziegler et al။ (1993) (ထိုအထီးဝါဂွမ်း-ထိပ်တန်း tamarins သရုပ်ပြSaguinus oedipus) လိင်ကတိုးချဲ့စိုက်ထူဖေါ်ပြခြင်းနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ဝတ္ထု၏အနံ့နှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါအမျိုးသမီး ovulating, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မှတောင်ပေါ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်, Smith ကနှင့်အာဘော့ (1998) ကြောင်းအထီးဘုံ marmosets တွေကို (သရုပ်ပြCallithrix jacchus) ovulatory-အနီးအနားနှင့် anovulatory အမျိုးသမီး marmosets တွေကိုများ၏အနံ့အကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်။ ထို့အပြင်ဝါဂွမ်း-ထိပ်တန်း tamarin အထီး (မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ထောင်ဖက်၏ကိုရွှေ့ဆိုင် ovulatory အချက်ပြမှုများမှ anticipatory ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြZiegler et al။ 2004) ။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုခြင်း (fMRI) နည်းလမ်းတွေ, ကူးတို့ et al။ (2001) ဝတ္ထုအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီး၏အနံ့ဟာ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်သိသာထင်ရှားသောတိုးထုတ်လုပ်နှင့် anterior hypothalamus (AH), လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှဦးဆောင် lesions သောဒေသများ (ကွောငျးဖျောပွခဲ့လွိုက် & Dixson က, 1988).
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအတွက်ဘုံ marmosets တွေကိုလူမှုရေးအရ monogamous ဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းလေ့လာမှုများ (Anzenberger, 1985, အီဗန်, 1983) သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်၏မျက်မှောက်ထဲကအထီးဝတ္ထုအမျိုးသမီးမှပိုးပန်းအပြုအမူကိုသရုပ်ပြမယ်လို့တွေ့ရှိရသဖြင့်, ရိုင်းထဲမှာ Digby (1999) နှင့် Lazaro-Perea (2001) အုပ်စုတိုင်းအတွက်မွေးမြူရေးအမျိုးသမီးအားလုံးပါဝင်သောကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ၏ marmosets တွေကိုအကြားမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လူမှုရေးစျမယားရှိနေသော်လည်းအထီး marmosets တွေကိုအထူးသဖြင့်မျိုးဥထွက်မှာ, ဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်အဆင်သင့်ပေါ်လာပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်များကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့ကြ Ziegler et al။ (2005) အရာတိုးမြှင့် sniffing ၏နှုန်းထားများနှင့်စိုက်ထူခြင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုအနံ့မှဆွေမျိုးသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏သိသာထင်ရှားသောမြင့်ခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ pair တစုံ-သျောအထီး marmosets တွေကိုဝတ္ထုအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီး၏အနံ့အတွက်အမူအကျင့်အကျိုးစီးပွားနှင့် arousal သရုပ်ပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ကောင်းမျောက်တွေကိုအတွက် Goldfoot ရဲ့ (1982) တွေ့ရှိချက်မတူဘဲအတွက် marmosets တွေကိုများတွင်အမျိုးသမီးအနီးအနား ovulatory ရနံ့နှင့်အထီးလိင်စိတ်နိုးထတစ်တိုက်ရိုက် stimulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ အကြံပြု
သို့သော်ဤအနက်အတွက်သတိထားအကြံပြုအချို့ဆနျ့ကငျြရလဒ်များကိုရှိပါတယ်။ တွင် Ziegler et al။ (2005) စမ်းသပ်ခြင်း၏ထိုအချိန်ကသည်ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြသည်သူကိုအထီးတစ်ဦးအပိုဆောင်းအုပ်စုတစ်စုအပြုအမူကိုတုံ့ပြန်နှင့်ဝတ္ထု, အနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီး၏အနံ့တစ်ခုအနည်းငယ်မျှသာဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ခုခုအနံ့မှတုံ့ပြန်မှုထိခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုအနီးအနား ovulatory မှအနံ့ fMRI စဉ်အတွင်း (ကူးတို့ et al ။ 2004) ကို MPOA နှင့် AH အပြင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများ activated ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား, အနီးအနား ovulatory မှအနံ့ striatum, hippocampus, septum, periacqueductal မီးခိုးရောင်နှင့် cerebellum အတွက်အပြုသဘောသွေးအောက်ဆီဂျင်အဆင့်မှီခို (BOLD) signal ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ယာယီ cortex အတွက် anovulatory အနံ့, cingulate cortex, putamen, hippocampus, subtstantia nigra မှအနုတ်လက္ခဏာ BOLD signal ကိုတိုးမြှင့်ထည့်သွင်း MPOA နှင့် cerebellum ။ ဤဒေသများအတော်များများဟာအာရုံခံအကဲဖြတ်, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် / သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ ဘိုးဘေးတို့၏အနီးအနား ovulatory မှလိင်စိတ်နိုးထတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုကျော်လွန်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်မျိုးစုံဦးနှောက်ဧရိယာများထံမှအနံ့လျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုများမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီး၏ရနံ့စစ်မှန်သော pheromones အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုသာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသရုပ်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု ယောက်ျားတစ်ဦးလူမှုရေးအရသက်ဆိုင်ရာအနံ့နှင့်အတူပေးအပ်ကြသောအခါ, ဆိုလိုသည်မှာ မိသားစုယောက်ျားနှင့် Non-pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီးနှင့်အတူတစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်အတူတစျဦး၏အိမ်ထောင်ဖက်ကို။
ဘိုးဘေးတို့သမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို marmosets တွေကိုလိင်တစ်ဦးဝတ္ထု, မတရားအနံ့အားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းခံရဖို့အေးစက်နိုင်ပါတယ်လျှင်, သူကယောက်ျားအမျိုးသမီးအနံ့မှအလိုအလျှောက်ကိုတုံ့ပြန်ပေမယ့်တကယ်တော့မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်တိကျတဲ့ olfactory features တွေခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ကြသည်ကိုမဖွယ်ရှိသည်။ တစ်ဦးမတရားအနံ့မှအေးစက်အောင်မြင်ပါကသညျဘိုးဘေး Non-တုံ့ပြန်မှုများမှာရှင်းပြမယ်, ဘာကြောင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဧရိယာများတိုက်ရိုက်လိင်စိတ်နိုးထတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများအပြင်အမျိုးသမီးအနံ့အားဖြင့် activated နေကြသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့လိင်စိတ်နိုးထ၏ endogenous ခြွင်းချက်မရှိတွေကိုမသက်ဆိုင်သောတစ် conditional လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သံပုရာထုတ်ယူသုံးပြီးလိင်-လက်ခံအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိမျှော်လင့်ဖို့ယောက်ျားအခြေအနေဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အလိုအလျောက် activation ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရပ်ကဒီရနံ့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမီအတွေ့အကြုံကိုခဲ့ရပြီး (1) သံပုရာ (limonene) အခြားအနံ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Basal BOLD activation တစ်ဦးအနိမ့်အဆင့်ကိုပြသ, အထူးသဖြင့်ဗာဒံ (2) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအေးစက်သံပုရာထုတ်ယူ (benzaldehyde) ကိုရွေးချယ် အများအပြား cortical နှင့် subcortical ဒေသများ (ကူးတို့ et al ။ , ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်) ပါ။
ကျနော်တို့ 3.5 ထံမှ6နှစ်အသက်အရွယ်အတွင်းရှိအထိလေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး marmosets တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ယောက်ျား၏နှစ်ဦးကိုအဘယ်သူမျှမမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိခင်ထက်အခြားတစ်ဦး ovulating အမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူသျောကညီအစ်ကိုတွေခဲ့ကြသည်။ အခြားနှစ်ဦးကိုယောက်ျားသည်အဘယ်သူ၏ ovulatory သံသရာ 0.75 μg Estrumate တစ် Prostaglands လုပ်လိုက်တာF1.0α analogue (cloprostenol ဆိုဒီယမ်) အား2သုံးပြီးထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်နှင့်အတူသျောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်နှင့်အခြားယောက်ျားတစ်ဦး (အမျိုးသမီးအနံ့မှတုံ့ပြန်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်ကူးတို့ et al။ , 2001, 2004).
ကျနော်တို့ဘာသာရပ်ယောက်ျားနှင့်အတူ copulatory လှုပ်ရှားမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန် 14 ဝတ္ထုအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီး (အထီးလက်အောက်ခံဖို့အကျွမ်းတဝင်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှ) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သွေးရည်ကြည်ချို့ယွင်းသောအဆင့်စာမေးပွဲအားဖြင့်စောင့်ကြည့်သမျှသောဤအမျိုးသမီး၏သားအိမ်သံသရာ (Saltzman et al။ 1994) သံသရာ၏ luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းပေးထား Estrumate နှင့်အတူထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲအနီးအနား ovulatory ကာလဒီကုသမှုပြီးနောက် 8-11 ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏ 1-2 ရက်အတွင်းအနီးအနား ovulatory ပြည်နယ်ရောက်ရှိရန်အချိန်ကျော်လွန်သွားလေးအလိုက်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးသမီးသုံးကြိမ်အပတ်တိုင်းကနေသွေးရည်ကြည်နမူနာကောက်ယူစီအမျိုးသမီးလိုချင်သောအချိန်တွင်အနီးအနား ovulatory အဆင့်၌ရှိ၏ကြောင်းအတည်ပြုရန်အဓိကချို့ယွင်းမှုအတွက် assayed ။
အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ 0.6 × 0.91 × 1.83 မီတာ (WXLXH) ဖြစ်ကြောင်းလှောင်အိမ်ထဲမှာအားလုံးအတွက်အဖြစ်သျောခဲ့ကြသည်။ အားလုံးသူတို့ကတခြား marmosets တွေကိုမြင်ခြင်း, ကြားခြင်းနှင့်အနံ့နိုင်ရှိရာကိုလိုနီခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များမွန်းတည့်အချိန်၌တိုက်ကျွေးခဲ့ကြနှင့်မျှမနေ့လည်ခင်းစမ်းသပ်ခြင်းဟာမွန်းတည့် feed ကိုအောက်ပါကအနည်းဆုံး 1.5 နာရီသည်အထိပြုလေ၏။ အပိုဆောင်းကိုလိုနီများနှင့်ဥယျာဉ်အခြေအနေများအားဖြင့်ဖော်ပြထားပါပြီ Saltzman et al ။ (1994).
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း (5 အဆင့်ပါဝင်သည်သဖန်းသီး။ 1): စမ်းသပ်မှုအဆင့်အေးစက်အဆင့်နှင့် Post-အေးစက်စမ်းသပ်အဆင့် preconditioning နှစ်ဦးလေ့အဆင့်။ အားလုံးအဆင့်စဉ်အတွင်းလှောင်အိမ်-အိမ်ထောင်ဖက်လှောင်အိမ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်နှင့်ကုလားကာနယ်မြေ display ကိုလျှော့ချရန်နှင့်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့အခြား marmosets တွေကိုမြင်နေထံမှစမ်းသပ်အထီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အခန်းထဲမှာအခြားတိရစ္ဆာန်များ၏အိတ်များကျော် installed ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအလေ့သုံးအဆက်ဆက်ရက်ပေါင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်အိမ်ထောင်ဖက်ဖယ်ရှားရေးကျော်ထွက်သယ်ဆောင်ကုလားကာ၏နေရာချထားခြင်းနှင့်လှောင်အိမ်ဖို့အချည်းနှီးသောလှုံ့ဆော်မှု box ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒုတိယလေ့အိမ်ထောင်ဖက်ဖယ်ရှားရေး, ကုလားကာနှင့်လှုံ့ဆော်မှု box ရဲ့နေရာချထားခြင်းနှင့်လေ့လာသူများထို့အပြင်ပါဝင်ပတ်သက်လေးယောက်အဆက်ဆက်ရက်ပေါင်းကျော်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လေ့နှင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏ Timeline ကို။
pre-အေးစက်စမ်းသပ်အဆင့်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီအထီးကျပန်းတန်ပြန်မျှမျှတတဒီဇိုင်းအတွက်သစ်သား discs တွေကို (မျှရနံ့) ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထိတွေ့ပြီးနောက်သစ်သား discs တွေကိုနှင့်ခြောက်လ 20 မိစမ်းသပ်မှုတွေပြည့်နှက်သံပုရာရနံ့ထိတွေ့ပြီးနောက်ခြောက်လ 20 မိစမ်းသပ်မှုတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု box ကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်စဉ်အတွင်းမျှအမျိုးသမီးပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူဗလာဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအေးစက်အဆင့်စဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီအထီးယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု box ထဲကဖြန့်ချိနေတဲ့အနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သံပုရာရနံ့ Pre-ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ (15 မိအထိ) တဆယ်နှစ်လုံးကိုစမ်းသပ်မှုတွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသံပုရာအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးအထီးသုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိ (Post-copulatory ဖြီးလိမ်းပုံသို့မဟုတ်ကျူးကျော်ပေါ်ပေါက်နိုင်မတိုင်မီ) သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရာ 15 မိပေါ်မှာချက်ချင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သံပုရာစမ်းသပ်မှုတွေတစ်ဦးအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု box ထဲမှာအမြဲခဲ့ပေမယ့်ဖြန့်ချိမခံခဲ့ရဘယ်မှာမျှ-သံပုရာအနံ့, မိတဆယ် 15 နှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ counterbalanced ခဲ့ကြသည်။ အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေနံနက်နှင့်နေ့လည်ခင်း session တစ်ခုအကြားညီတူညီမျှမျှမျှတတခဲ့ကြသည်အပေါင်းတို့နှင့်9ရက်ဆက်တိုက်ကျော်ပြီးစီးခဲ့ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Post-အေးစက်စမ်းသပ်ခြင်းအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏အဆုံးပြီးနောက်5ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့ပြီးသံပုရာအနံ့နှင့်ခြောက်လ 20 မိထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေထိတွေ့ပြီးနောက်ခြောက်လ 20 မိစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်စမ်းသပ်မှုနှင့်ဆင်တူခဲ့သည်။ pre-အေးစက်စမ်းသပ်မှုအဆင့်၌ရှိသကဲ့သို့အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု box ထဲမှာမပါအမျိုးသမီးပစ္စုပ္ပန် Post-အေးစက်စမ်းသပ်အဆင့်စဉ်အတွင်းရှိ၏။ ကောင်တာ-မျှမျှတတ Pre-အေးစက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ Post-အေးစက်စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းအေးစက်အဆင့်မီသို့မဟုတ်အပြီး4ရက်ပေါင်းစတင်ဖြစ်စေတစ်ဦး5တစ်ရက်ကာလအတွင်းထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အားလုံးအဆင့်စဉ်အတွင်းတစ်ခုချင်းစီကိုနံနက်လှောင်အိမ်-အိမ်ထောင်ဖက်နေ့ကိုရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပြီးစီးမှီတိုင်အောင်ပြန်လာသောဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မခံခဲ့ရပါဘူး။ မတိုင်မီကအဆိုပါအပြုအမူစမ်းသပ်မှုတွေမဆိုမှတစ်ခုချင်းစီကိုအထီးက၎င်း၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်နှင့်အသိုက် box ကိုလေကြောင်းတွင်းလေးသစ်သား discs တွေကိုင်တစ်ဦးချွတ်ဖို့လာမယ့် aligned ရာသီးခြားအခန်းသန့်ရှင်းသံမဏိ box ထဲမှာပို့ဆောင်။ သံပုရာရနံ့စမ်းသပ်မှုတွေတွင်သံပုရာထုတ်ယူတစ်ခုချင်းစီ disc ကိုထိန်းချုပ် 100 μlနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်ရှိကြသည်သစ်သား discs တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အထီးလေးမိများအတွက် discs တွေကိုဘေးမှာကျန်ရစ်ထို့နောက်အထီးကို manually box ကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးတစ်ဦးသံပုရာရနံ့ disc ကိုသို့မဟုတ် (အခြေအနေပေါ် မူတည်. ) တစ်ခုရှိကြသည် disc ကိုဖြစ်စေသူ၏နှာခေါင်းအောက်မှာကျင်းပနေစဉ်အိမ်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောခဲ့သည်။
အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေများအတွက်လှုံ့ဆော်မှု box ကိုရနံ့ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းယောက်ျားရဲ့လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာနှင့်အမြဲတစ်ဦးအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးပါရှိသောခဲ့သညျ။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုသေတ္တာတံခါးကိုသစ်သား disc ကို, ရနံ့သို့မဟုတ်ရှိကြသည်ဖြစ်စေသံပုရာင်တစ်ဦးကလီပ်နှင့်အတူလုံခြုံခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားပြန်လာသောသုံးမိနစ်ပြီးနောက်ကလစ်ရနံ့မဆံ့မယ့်အလုံပိတ်ဇစ်-လော့ကျွန်းအိတ်သို့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နေရာချပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ချက်ချင်း disc ကိုနှင့်အနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူအခြားကလစ်အတူကလစ်အစားထိုးထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေတွင်အသိုက် box ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သံပုရာစမ်းသပ်မှုတွေတွင်တံခါးကိုဖွင့်ထားကျန်ရစ်နှင့်အမျိုးသမီးချက်ချင်းအသိုက် box ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု box ကိုကလစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ 15 မိများအတွက်အထီးအပေါ်အပြုအမူ data တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော, ဒါမှမဟုတ်တစ်သုတ်ရည်လွှတ် (သာသံပုရာစမ်းသပ်မှုတွေ) ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အထိပါပဲ။ ဒေတာကိုတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိလေ့လာသူများကအချိန်-tagged လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်၏အဆုံးမှာအမျိုးသမီးနှင့်လှုံ့ဆော်မှု box ကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားခဲ့သည်နှင့်အထီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိုက် box ကိုဖွင့်လှစ်တံခါးကိုနှင့်အတူပြန်လာ၏။ လတ်ဆတ်သော, သန့်ရှင်းရေးလှုံ့ဆော်သေတ္တာများတစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နေ့ကိုဖွင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏အဆုံးမှာကုလားကာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ယောက်ျားရဲ့လှောင်အိမ်-အိမ်ထောင်ဖက်ပြန်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အထီးတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးသံပုရာနှင့်တဦးတည်းကိုထိန်းချုပ်အေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးခံ ယူ. သားယောက်ျားကိုတစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ပါသည်တစ်ခုချင်းစီကိုအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးပေါ်မှာ။ အဘယ်သူမျှမယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတွဲခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုသာတခါတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးသံပုရာအေးစက်လမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အထီးတစ်ထိန်းချုပ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ယခင်ကထိုနေ့၌ copulated ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကြုံတွေ့ရဘယ်တော့မှမယ်လို့သို့မှသာတစ်ဦးချင်းစီအထီးအဘို့အမျိုးသမီးကြိုတင်တစ်ဦးသံပုရာအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရဖို့ထိန်းချုပ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ဝတ်ပြုကြ၏။
pre-အေးစက်နဲ့ post-အေးစက်စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့မရှိ, အမြိုးသမီးဟာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု box ထဲမှာလက်ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှု box ကိုအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ကြောင်းနှင့်3သံပုရာဆှတျဖနျြးသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကလစ် MIN ပြီးနောက်သစ်သား disc ကိုအခြားကလစ်ဖြင့်အစားထိုးခံခဲ့ရသည်ကျနော်တို့ 20 မိဘို့အမူအကျင့် data တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
အမူအကျင့်မှာ Data Collection ကိုနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း
စိတ်ကြိုက် software ကိုသုံးပြီးလက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာသို့အပြုအမူဒေတာ: အားလုံးစမ်းသပ်အဆင့်, အချိန်-tagged သရုပ်ဆောင် coded အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိလေ့လာသူစဉ်အတွင်း။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာသူရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှ habituated ခဲ့ကြသည်။ pre-အေးစက်နဲ့ post-အေးစက်စမ်းသပ်စမ်းသပ်မှုတွေ (မျှအမျိုးသမီးပစ္စုပ္ပန်ခဲ့) အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေ sniffing, ဒါမှမဟုတ်သေတ္တာ-ညွှန်ကြားအပြုအမူတစ်ခုတည်းအတိုင်းအတာသို့ချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်သောသေတ္တာကိုထိ၏စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု box ကို-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေ၏ကြိမ်နှုန်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်လည်း (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ်အကြိမ်ရေကုပ်ခြစ်, လှောင်အိမ်အတွင်း quadrant ကူးကြိမ်နှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီး locomotor လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ထားသောCilia & Piper, 1997; Barros et al။ , 2000) နှင့်တစ်ဦးစိုက်ထူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေမအင်္ဂါဟု၏မြင်ကွင်းထဲမှာ မူတည်. ကြော်ငြာ lib အခြေခံ () ပေါ်မှာ။ သံပုရာအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းကျွန်တော်သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိအပါအဝင်ဤအစီအမံအပေါ်ဒေတာအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုစုဝေးစေ။ ဒေတာကို 0.05 မှာသတ်မှတ်ထား alpha နှင့်အတူစီစဉ်ထားနှိုင်းယှဉ် Two-tailed ဆက်စပ်နမူနာ t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမဒေတာအစုတစ်ခုထက် ပို. နှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အားလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းတိုင်းသံပုရာအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulated ။ pre-အေးစက်စမ်းသပ်အဆင့်စဉ်အတွင်းအသိုက် box ကိုမှညွှန်ကြားလုပ်ရပ်များအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သံပုရာအနံ့အကြားမျှခြားနားချက်, 2.03 ± 0.48..1.95 ထိန်းချုပ်ဖို့, ± SEM သံပုရာ0± 50 အဓိပ်ပာ (ရှိခဲ့သည် t(3) = 0.151, ns) ပေမယ့် Post-အေးစက်စမ်းသပ်အဆင့်တွင်သံပုရာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (သံပုရာ 17.5 ± 3.4, 1.75 ± 0.85 ထိန်းချုပ်ဖို့, t(3) = 4.70, p = 0.018, ပုံ 2) ။ box ကို-ညွှန်ကြားအပြုအမူမတူဘဲအတွက်သံပုရာနှင့်ဖြစ်စေ Pre-အေးစက် (သံပုရာ 28.5 ± 5.83 မရှိသံပုရာစမ်းသပ်မှုတွေအကြားရွေ့လျားမကွာခြားချက်, 29.1 ± 7.43 ထိန်းချုပ်ရှိ၏ t (3) = 0.130, ns) သို့မဟုတ် Post-အေးစက်အဆင့် (သံပုရာ 23.1 ± 4.97, 28.9 ± 9.52 ထိန်းချုပ်ဖို့, t (3) = 0.764, ns, ပုံ 3) ။ ကျနော်တို့ဆို Pre-အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်မ Post-အေးစက်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်စိုက်ထူလေ့လာတွေ့ရှိဘူး။ သို့သော် (postconditioning သံပုရာလမ်းကြောင်း၏ 79.2% ±စိုက်ထူ 14.4 တစ်အတောအတွင်းအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်t(3) = 6.33, p = 0.008, ပုံ 4) ။ ကုပ်ခြစ်၏နှုန်းမှာ, pre-အေးစက်အဆင့်သံပုရာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားကွာခြား (သံပုရာ 25.1 ± 7.36, 18.0 ± 3.52 မထိန်းချုပ်ခဲ့ဘူး t (3) = 1.54, ns) ဒါပေမယ့် 41.0 ± 8.23 ထိန်းချုပ်ဖို့, Post-အေးစက်အဆင့် (သံပုရာ 18 ± 4.76 အတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး t (3) = 4.00, p = 0.028, ပုံ 5).
Pre-အေးစက်နဲ့ post-အေးစက်အဆင့်၌ (မထိ, ကို sniff မှာကြည့်ရှု) ရုံးတင်စစ်ဆေးနှုန်း box ကို-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုဆိုလိုတာ။ Post-အေးစက်အဆင့်သံပုရာလမ်းကြောင်းအတွက် box-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ (အပေါ်ထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်များမှာp = 0.018) ။
Pre-အေးစက်နဲ့ post-အေးစက်အဆင့်အတွက်လမ်းကြောင်းနှုန်း locomotor အပြုအမူကိုဆိုလိုတာ။ အဆင့်ဖြစ်စေဘို့သံပုရာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုတွေကို pre-နှင့်တစ်ခုစိုက်ထူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ဘယ်မှာ Post-အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုဆိုလို။ postconditioning စမ်းသပ်မှုများတွင်ထိန်းချုပ်မှုဖို့ထက်သံပုရာမှစိုက်ထူနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအစည်းအဝေးများ (ရှိခဲ့သည်p = 0.008) ။
Pre-အေးစက်နဲ့ post-အေးစက်အဆင့်အတွက်စမ်းသပ်မှုနှုန်းခြစ်ရာနှုန်းကိုဆိုလို။ Post-အေးစက်အဆင့်ထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေထက်သံပုရာစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်သိသိသာသာပိုပြီးခြစ် (ရှိခဲ့သည်p = 0.028) ။
ဒီလေ့လာမှုကအထီး marmosets တွေကိုအောင်မြင်စွာတစ်ခုလိုမင်းထက် olfactory cue, သံပုရာရနံ့မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုပြသအေးစက်နိုင်ပြသထားတယ်။ သော conditional လှုံ့ဆော်မှု, သံပုရာအနံ့ထွက်ထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှေ့အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအတူတွဲနှင့်အမျိုးသမီးသုတ်ရည်ထိများအတွက်ရရှိနိုင်အခါပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ Post-အေးစက်အဆင့်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု box ကိုရန်တိုးမြှင့်နီးကပ်တခြားလေ့လာမှုတွေ (ဥပမာအတွက်သရုပ်ပြနေတဲ့ conditional ရာအရပျ preference ကိုဆင်တူသည် Meisel & Joppa, 1994) ။ အဘယ်သူမျှမယောက်ျားမဆိုကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်သံပုရာသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မည်သည့် postconditioning ထိန်းချုပ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးတခုတခုအပေါ်မှာစိုက်ထူသရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်စိုက်ထူတဲ့အမျိုးသမီးကနေမဆိုတွေကိုမရှိခြင်းအတွက်သံပုရာရနံ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်း conditional လိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြ postconditioning စမ်းသပ်မှုတွေ၏ 79.2% တစ်ခုယုတ်အပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အရှင် marmosets တွေကိုအေးစက်အောက်ပါသံပုရာအနံ့မှကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့် function သင့်လျော်သော anticipatory အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပြသ။ ဤရလဒ် marmosets တွေကိုတစ်ဦးအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတစ်ဝတ္ထု olfactory cue ပေါင်းသင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။
Post-အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေငါးရက်အေးစက်၏အဆုံးအပြီးစတင်ခဲ့ပြီးလေးနေ့ရက်ကာလအဘို့ဆက်လက်ကတည်းကအေးစက်၏ဆိုးကျိုးများအတော်ပင်ကြာရှည်ခဲ့သညျ။ nonhuman တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအခြားအလေ့လာမှုများအတွက်စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ (အေးစက်အောက်ပါချက်ချင်းနောက်ဆုံးအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအောက်ပါဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်တနေ့မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည် Domjan et al ။ 1988, Holly et al ။ 1989, Holly et al ။ 1997; Kippin et al, 1998; Zamble et al။ , 1985, 1986).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်လေးအထီးနှစျယောကျလိင်ရင်တော့မှားမယ်ကြပေမဲ့အဲဒီမှာကဤယောက်ျားနှင့်သုတ်ရည်ထိနံပါတ်များကိုအတွေ့အကြုံ, တွဲအထီး (အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်မှာရှိသမျှအမျိုးသမီးနှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်မှ copulated အားလုံးယောက်ျား) အကြားမျှခြားနားချက်ခဲ့မဟုတ်သလိုအဲဒီမှာပို့စ်တွင်မဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအပြုအမူကွဲပြားခြားနားမှုခဲ့ကြသည် -conditioning စမ်းသပ်မှုတွေ။ နှိုးဆော်ခြင်းများနှင့်လိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအဖြစ်အခြေအနေအဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်လိင်နုံ marmosets တွေကိုခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးကအတန်ငယ်စဉျးရလဒ်သံပုရာလမ်းကြောင်း Post-အေးစက်အပေါ်အပြုအမူကုပ်ခြစ်အတွက်သိသိသာသာတိုးဖြစ်ပါသည်။ Scratch ((ကနီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည့်မျိုးစိတ်အပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်စိုးရိမ်စိတ်များပြတဲ့အပြုအမူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးBarros et al ။ 2000) ။ သံပုရာစမ်းသပ်မှုတွေ postconditioning အပေါ်တိုးမြှင့်ကုပ်ခြစ်မှုနှုန်းဘို့တဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းပြချက်အေးစက်အထီးစဉ်အတွင်းသံပုရာအနံ့၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulate ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြကြောင်း, ပြီးတော့ postconditioning စမ်းသပ်မှုတွေမရှိအမျိုးသမီးသေတ္တာထဲတွင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပြီး သို့ဖြစ်. အဘယ်သူမျှမများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ သုတ်ရည်ထိ။ အပိုဆောင်းလေ့လာမှုပိုကောင်းဒီရလဒ်နားလည်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဘုံ marmosets တွေကိုနှင့်ဝါဂွမ်း-ထိပ်တန်း tamarins နှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် testosterone ဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရေး (နဲ့အတူ ovulatory-အနီးအနားနှင့် Non-ovulatory အမျိုးသမီး၏အနံ့အကြားခွဲခြားရန်လေ့လာတွေ့ရှိပြီSmith & အက်ဘော့, 1998, Ziegler et al။ 1993, 2005) ။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်မှတဆင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းအနီးအနား ovulatory အနံ့ (ဘုံ marmosets တွေကိုအတွက် medial preoptic ဧရိယာနှင့် anterior hypothalamus activate လုပ်နိုင်ပါတယ်ကူးတို့ et al။ , 2001).
သို့သော်တစ်ဦးမတရားအနံ့မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏သရုပ်ပြဘုံ marmosets တွေကိုအကြောင်းကိုတစ်ခုသိသာဝိရောဓိဖြေရှင်းကူညီပေးသည်။ သုံ့ပန်းနှင့်ကွင်းဆင်းနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက် (Anzenberger, 1985, Digby, 1999; အီဗန်, 1983; Lazaro-Perea, 2001) ဘုံ marmosets တွေကိုပိုးပန်းအပြုအမူများနှင့်အခြားအုပ်စုများအနေဖြင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအပို-pair တစုံသုတ်ရည်ထိထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ, သေးအနီးကပ် pair တစုံနှောင်ကြိုးသည်ဘိုးဘေးတို့ကျယ်ပြန့်မိဘစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကတည်းကနုပျို၏အောင်မြင်သောမွေးမြူများအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးမှာဖခင်ဖြစ်ကြောင်း၏ဧကန်အမှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမယ်လို့အပြုအမူအရေးကြီးသောပါလိမ့်မယ်။ ယောက်ျားကသူတို့အိမ်ထောင်ဖက်မှအမြင်အာရုံ access ကို (အခါသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအခြားအမျိုးသမီးနှင့်အတူအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသတ်နေသည်Anzenberger, 1985) နှင့်မှီခိုမွေးကင်းစပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သည့်အခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအပို-အုပ်စုသည်သုတ်ရည်ထိလေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်ရိုင်းအတွက်, မွေးမြူရေးအမျိုးသမီးအပို-အုပ်စုသည်သုတ်ရည်ထိထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံကြဘူး (Lazaro-Perea, 2001), အပို-အုပ်စုသည်သုတ်ရည်ထိပါဝင်အချို့ Non-မွေးမြူအမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်ဆောင်ရစေခြင်းငှါပေမယ့်အောင်မြင်စွာနောက်ဘက်မှမတတျနိုငျများမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမည်သည့်မွေးကင်းစ (Digby 1995; Roda & Medes Pontes 1998; Lazaro-Perea et al 2000; Melo အဘိဓါန် et al 2003; Arruda et al 2005; Sousa et al 2005; Bezerra et al 2007), ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း၏ဧကန်အမှန်ဖြစ်ပေး။ (1) သည်ဘိုးဘေးတို့ (Non-ဖခင်အထီးများကပြထားတဲ့အတိုင်းအမူအကျင့်အကျိုးစီးပွားနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်တိုးမရှိခြင်းမဟုတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဝတ္ထု, အနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးထံမှအနံ့မှတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနောက်ထပ်အချက်အလက်များZiegler et al, 2005) နှင့်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး (2) အနံ့မှတ်ဉာဏ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများ၏ activation သွေးဆောင် (ကူးတို့ et al ။ 2004) နှစ်ဦးစလုံးအထီး marmoset လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအနီးအနား ovulatory အမျိုးသမီးများကလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်တစ်ခုနှိုးဆွသော pheromones အားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာမောင်းနှင်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဲဒီအစားအခြားအဖြစ်စဉ်များပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကဲ့သို့ (အကြံပြု Goldfoot (1981) ဖခင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မဖခင်တစ်ဦးနှင့်အနံ့လည်းရှိသောယောက်ျားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပတ်သက်သောသီးခြားတွေကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူမသာ, တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်တွဲဖြစ်စေ, အထီး marmoset လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလှုံ့ဆော်သောတွေကို multivariate ဖြစ်ကြပြီးအထီးရဲ့လူမှုရေးအခွအေနေပါဝင်ကြောင်း) မျောက်များဘို့ထိုသို့ပြု တွေကိုဒါပေမယ့်လည်းအသံနှင့်အမြင်အာရုံတွေကိုတိကျတဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာ။ မှတ်ရန် Anzenberger (1985) အိမ်ထောင်ဖက်၏မြင်နိုင်ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး၏ပိုးပန်းတားစီးဖို့လုံလောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
marmosets တွေကိုနှင့် tamarins အတော်ကြာမျိုးစိတ်လေ့လာရေးတစ်ဦးတည်းအနံ့အားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအသိအမှတ်ပြုမှုအစီရင်ခံခဲ့ကြ (ကြည့်ရှု Epple, 1986 ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့်လက်ရှိလေ့လာမှုအထီးအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကမှတဆင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်ဖော်ထုတ်တွေကိုလေ့လာသင်ယူစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူမတရားအနံ့တွေကိုပေါင်းသင်းတတ်ရန်သင်ယူနိုင်သောပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအနံ့နှင့်အထီးလူမှုရေးအဆင့်အတန်းတစ်ခု function ကိုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး၏အခြားအာရုံခံတွေကိုမှအထီး marmosets တွေကိုများ၏အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆနျးစစျဖို့အနာဂတ်သုတေသနစိတ်ဝင်စားစရာနှင့်အရေးကြီးသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
MH058700 ချားလ်စ်တီ Snowdon နှင့် Toni အီး Ziegler နှင့် RR035215 ဖို့ Wisconsin ပြည်နယ်အမျိုးသားမျောက်သုတေသနစင်တာမှရန်, Craig အက်ဖ်ကူးတို့မှကနျြးမာရေးထောက်ပံ့ရေး MH00167 အမျိုးသား Institutes အားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ CK ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Pavlovian အေးစက်၏အခန်းကဏ္ဍကို: လူ့ခြင်းနှင့် nonhuman တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်။ int J ကို comp psyche ။ 2004; 17: 241-262 ။
Anzenberger G. အဘုံ marmosets တွေကိုများ၏ဘယ်လိုလူစိမ်းတွေ့ဆုံ (Callithrix jacchus jacchus) မိသားစုဝင်တွေကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်: အပြုအမူများ၏အရည်အသွေး။ Folia Primatol ။ 1985; 45: 204-224 ။
Arruda MF, Araujo တစ်ဦးက, Sousa ကို MB, သည် Albuquerque FS, သည် Albuquerque AC အ, Yamamoto ME ။ (ဘုံ marmosets တွေကိုအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာလက်အောက်ခံအမျိုးသမီးမဟာဗျူဟာ: အခမဲ့-နထေိုငျအုပျစုအတှငျးရှိနှစ်ဦးကမွေးမြူရေးအမျိုးသမီးအမြဲ polygyny ညွှန်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါCallithrix jacchus) Folia Primatol ။ 2005; 76: 10-20 ။ [PubMed]
Barros M က, Boer V ကို, Huston JP, Tomaz C. အဆိုပါ marmoset အတွက်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်တိုင်းတာခြင်း (Callithrix penicillataက) ဝတ္ထုအသားစားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမော်ဒယ်နှင့်အတူ: Diazepam ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2000; 108: 205-211 ။ [PubMed]
Bezerra BM, ဒါဆေးလ်ဗား Souto တစ်ဦးက, Schiel N. ကလေးနှင့်ဘုံ marmosets တွေကိုတစ်ဦးအခမဲ့-အထိအများကိန်းမွေးမြူရေးအုပ်စုသည် (ထဲမှာလူသားစားCallithrix jacchus) Am J ကို Primatol ။ 2007; 69: 945-952 ။ [PubMed]
ဓာတ်ခွဲခန်းသွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်, Spiering M က, Everard W က, Laan အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်တုန့်ပြန် S နှစ်ဦးစလုံး။ J ကိုလိင် Res ။ 2004; 41: 242-258 ။ [PubMed]
Cilia J ကို, Piper DC က။ marmoset conspecific ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု: စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခု ethologically-based မော်ဒယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1997; 58: 85-91 ။ [PubMed]
Crowley WR, Poplow HB, ရပ်ကွက် OB, dud မှစ. လုံးမှ Jr ။ Copulatory အပြုအမူလိင်မလှုပ်မရှားအထီးကြွက်များတွင်အေးစက် arousal မှတဆင့်ရူးနှမ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 1973; 10: 391-394 ။ [PubMed]
Digby LJ ။ မွေးကင်းစကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး, ကလေးနှင့်ဘုံ marmosets တွေကို၏ polygynous အုပ်စုများအတွက်အမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုနည်းဗျူဟာများ (Callitrhrix jacchus) ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1995; 37: 51-61 ။
Digby LJ ။ ဘုံ marmosets တွေကိုတစ်ဦးရိုင်းသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် extragroup သုတ်ရည်ထိ (Callithrix jacchus) Folia Primatol ။ 1999; 70: 136-145 ။ [PubMed]
Domjan M က, Blesbois အီး, ဝီလျံဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်, psyche ၏သပ္ပါယ်အဓိပ်ပာယျ။ သိပ္ပံ။ 1998; 9: 411-415 ။
ဓာတုအချက်ပြခြင်းဖြင့် Epple G. အဆက်သွယ်ရေး။ ခုနှစ်တွင်: မစ်ချယ်, G, Erwin J ကို, အယ်ဒီတာများ။ နှိုင်းယှဉ်မျောက်ဇီဝဗေဒ, Vol ။ 2A အပြုအမူ, ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဂေဟဗေဒ။ အလန် R. Liss; နယူးယောက်: 1986 ။ စစ။ 531-580 ။
အီဗန်အက်စ်ဘုံ marmoset ၏ pair တစုံ-နှောင်ကြိုး, Callithrix jacchus: တစ်ရပ်စမ်းသပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Animation ပြုမူနေ။ 1983; 31: 651-658 ။
ကူးတို့ CF, Snowdon မှန် CT ဘုရင်ဂျာ Duong TQ, Ziegler TE, Ugurbil K ကိုက Ludwig R ကို, Schultz-မိုက် NJ, Wu-Z, Olson DP, Sullivan က JM, Jr က Tannenbaum PL, Vaughn JT ။ လိင်တွေကိုနှိုးဆွသောတုံ့ပြန်သတိမျောက်များအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု functional ပုံရိပ်။ NeuoReport ။ 2001; 12: 2231-2236 ။ [PubMed]
ကူးတို့ CF, Snowdon မှန် CT ဘုရင်ဂျာ Sullivan က JM, Jr က Ziegler TE, Olson DP, Schultz-မိုက် NJ, Tannenbaum PL, Ludwig R ကို, Wu-Z, Einspanier တစ်ဦးက, Vaughn JT, Duong TQ ။ Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ activation ။ J ကို Mag Res image ။ 2004; 19: 168-175 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goldfoot DA ။ Olfaction, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မျောက်တွေကိုအတွက် pheromones အယူအဆမြား: A ဝေဖန်မှု။ နံနက် Zool ။ 1981; 21: 153-164 ။
Hoffman ဟာ H ကို, Janssen အီး, Turner SL ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဂန္ထဝင်အေးစက်: ကွဲပြားအသိအမြင်နှင့် conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဇီဝဆက်စပ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2004; 33: 43-53 ။ [PubMed]
Holly KL, Colbert EL, Naura အမ် Pavlovian အေးစက်၏ဇီဝလုပ်ငန်းဆောင်တာ: အပြာရောင် gourami အတွက်မိတ်လိုက်အောင်မြင်မှုများအတွက်တစ်ဦးကယန္တရား (Trichogaster tricopterus), ဂျေ comp ။ psyche ။ 1989; 103: 115-121 ။
Holly KL, Pharr VL, Dumas MJ, Britton GB ကို, ဖျော်ဖြေမှုဂျေနျ Classical အေးစက်နယ်မြေအထီးအပြာ gouramis များအတွက်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းအားသာချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး (Trichogaster tricopterus) J ကို comp psyche ။ 1997; 111: 219-225 ။
Johnston RE, Zahorik DM, Immler K သည်, ကြွက်အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမှသင်ယူဆန္ဒရှိနေဖြင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Zakon အိပ်ချ် ALTER ။ J ကို comp Physiol psyche ။ 1978; 92: 85-93 ။ [PubMed]
Kippin TE, Talianakis S က, Schattmann L ကို, ဗာသောလမဲက S, Pfaus JG ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Olfactory အေးစက် (Rattus norvegicus) J ကို comp psyche ။ 1998; 112: 389-399 ။
Lalumière ML, Quinsey VL ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား Pavlovian အေးစက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1998; 27: 241-252 ။ [PubMed]
ရိုင်းဘုံ marmosets တွေကိုအတွက် Lazaro-Perea C. Intergroup interaction က, Callithrix jacchus: အိမ်နီးချင်းပိုင်နက်ကာကွယ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်။ Animation ပြုမူနေ။ 2001; 62: 11-21 ။
Lazaro-Perea ကို C, ကက်စထရို CSS ကို, Harrison R ကို, Araujo တစ်ဦးက, Arruda MF, Snowdon မှန် CT ။ အမူအကျင့်များနှင့်ပူးပေါင်းမွေးမြူ marmosets တွေကိုအတွင်းရှိမွေးမြူရေးအမျိုးသမီး၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအောက်ပါလူဦးရေဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 2000; 48: 137-146 ။
Letourneau EJ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ O'Donohue ဒဗလျူနျ Classical အေးစက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1997; 26: 63-78 ။ [PubMed]
လွိုက် sac, Dixson AG က။ အထီးဘုံ marmoset များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအပေါ်သို့ hypothalamic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ (Callithrix jacchus) ဦးနှောက် Res ။ 1988; 463: 317-329 ။ [PubMed]
McDonnell သည် SM, Kenney RM, Keckly PE, Garcia က MC ။ diazepam နှင့်အတူမြင်းများနှင့်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဖိနှိပ်မှုအေးစက်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1985; 34: 951-956 ။ [PubMed]
Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA ။ ပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအောက်ပါအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 56: 1115-1118 ။ [PubMed]
Melo အဘိဓါန် L ကို, Mende ပိုတငျးက AR, Montiero da Cruz, MA ။ ရိုင်းဘုံ marmosets တွေကိုများတွင်ကလေးနှင့်လူသားစား။ Folia Primatol ။ 2003; 74: 48-50 ။ [PubMed]
မိုက်ကယ် RP, Keverne eb ။ မျောက်ဝံများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဆက်သွယ်ရေးအတွက် pheromones ။ သဘာဝ။ 1968; 218: 746-749 ။ [PubMed]
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်ကဘာလဲ Pfaus JG, Kippin TE, Coria-Avila G. အ? အမ်းဗြာလိင် Res ။ 2003; 14: 1-63 ။ [PubMed]
Roda လုပ် SA, ပိုတငျးက AR ။ ဘရာဇီးရဲ့အတ္တလန္တိတ်သစ်တောတစ်အပိုင်းအစအတွက်ဘုံ marmosets တွေကိုအတွက် Polygyny နှင့်ကလေး။ Folia Primatol ။ 1998; 69: 372-376 ။ [PubMed]
Saltzman W က, Schultz-မိုက် NJ, Scheffler, G, Wagner က F, အာဘော့ဃလူမှုရေးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို marmoset မျောက်အတွက်ပလာစမာ cortisol အပေါ်မျိုးဆက်ပွားလွှမ်းမိုးမှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 56: 801-810 ။ [PubMed]
Smith က TE, အာဘော့ DH ။ အနီးအနား ovulatory ကြီးစိုးနှင့် anovulatory အမျိုးသမီးဘုံ marmosets တွေကို (ထံမှ circumgenital အနံ့အကြားအပြုအမူခွဲခြားဆက်ဆံမှုCallithrix jacchus) Am J ကို Primatol ။ 1998; 46: 265-284 ။ [PubMed]
Sousa ကို MB, Alburqueque AC အ, da Alburqueque FS, Araujo တစ်ဦးက, Yamamoto ME, က de Arruda MF ။ အမူအကျင့်မဟာဗျူဟာများနှင့်ကြီးစိုးနှင့်လက်အောက်ခံဘုံ marmoset ၏ဟော်မုန်း profile များကို (Callithrix jacchus) ရိုင်း monogamous အုပ်စုများအတွက်အမျိုးသမီး။ နံနက် J ကို Primatol ။ 2005; 67: 37-50 ။ [PubMed]
Zamble အီးဟာဒဒ် GM က, Mitchell က JB, Cutmore TRH ။ လိင်စိတ်နိုးထ၏ Pavlovian အေးစက်: first- နှင့်ဒုတိယယူမှုကိုဆိုးကျိုးများ။ J ကို Exp psyche: Animation ပြုမူနေ proc ။ 1985; 11: 598-610 ။ [PubMed]
Zamble အီး, Mitchell က JB, လိင်စိတ်နိုးထ၏ Findlay အိပ်ချ် Pavlovian အေးစက်: parametric နှင့်နောက်ခံထိန်းသိမ်းရေး။ J ကို Exp psyche: Animation ပြုမူနေ proc ။ 1986; 12: 403-411 ။ [PubMed]
Ziegler TE, Epple, G, Snowdon မှန် CT, Porter က TA, Belcher လေး, အဝါဂွမ်း-ထိပ်တန်း tamarin အတွက်မျိုးဥထွက်၏ဓာတုအချက်ပြမှုများ၏ Kuderling အယ်လ်ထောက်လှမ်းခြင်း, Saguinus oedipus။ Animation ပြုမူနေ။ 1993; 45: 313-322 ။
Ziegler TE, Jacoris S က, Snowdon မှန် CT ။ မွေးမြူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဝါဂွမ်း-ထိပ်တန်း tamarins အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး (Saguinus oedipus) နှင့်မွေးကင်းစကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ နံနက် J ကို Primatol ။ 2004; 64: 57-69 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ziegler TE, Schultz-မိုက် NJ, Scott JJ, Snowdon မှန် CT, ကူးတို့ CF. အမျိုးသမီး ovulatory အနံ့မှ Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအထီးဘုံ marmosets တွေကိုများတွင်လူမှုရေးအခွအေနေပျေါမှာမူတည်ပါတယ်, Callithrix jacchus, Horm ။ ပြုမူနေ။ 2005; 47: 56-64 ။ [PubMed]